Ngokuqhelekileyo asinakuyithobela ingqalelo, ukuba intloko iyancipha nje kwaye intliziyo iyanyanyiswa kaninzi. "Ukunyuka, imozulu, ndandiphayika, ndavuya," - sicinga. Enyanisweni, kukho ukubonakaliswa kwe-cardiac arrhythmia - ukuphulwa kwentliziyo yesigqi. Ezo zinto, ziyakwazi ukufihla kunye neengxaki ezinzulu. Iimbangela kunye neentlobo ze-arrhythmias zenhliziyo zihlukile. Kwaye le nto ingxaki.
I-node ye-sinus yenza isigxina sombane esenza iziphambano zentliziyo ye-muscle. Umsebenzi wombane we-node ye-sinus kufuneka ngokuqhelekileyo ulawulwe umsebenzi wabo bonke abanye iiseli entliziyweni. Ukuba ngaphantsi kwefuthe lokugula kunye nezinye izinto ezingafanelekiyo umsebenzi we "pacemaker" uphulwa, imithombo emitsha yeempembelelo ibonakala kwezinye iindawo ze-myocardium, eqala ukukhuphisana okanye ikhuphe i-node yesode. Oku kubangela ukuphazamiseka kwentliziyo yesigqibo - i-arrhythmia, iintlobo ezimbalwa zeentlobo. Iintlobo eziqhelekileyo ze-cardiac arrhythmia zi:
- i-flutter kunye ne-fibrillation ye-atrial;
i-tachycardia ye-paroxysmal - intliziyo ayisoloko ibetha ngenhliziyo, kodwa ukuhlaselwa (i-paroxysms). Ukuba i-ECG ayenziwanga ngexesha lokuhlaselwa, iya kubonisa isigqi sesimo esivamile;
- ukukhutshwa kwentliziyo.
Ukuba uvakalelwa ukuphazamiseka okanye ukuphazamiseka emsebenzini weentliziyo, izibilini, iintliziyo ezingathandekiyo, ubuthathaka, utywala, ukuphelelwa amandla, kufuneka utyelele i-cardiologist.
Yintoni edibanisa isigqi?
Into ebaluleke kakhulu kukumisela kuphela i-arrhythmia yentliziyo, kodwa nayo ibangela yayo. Emva koko, i-arrhythmia ngokwayo ayisisifo, kodwa isibonakaliso, ukubonakaliswa kwezifo ezahlukahlukeneyo. Ukongezelela, ukuba ukuhlaselwa ngokukhawuleza kudlulileyo, ngelixa isizathu singagqitywanga, sinokuqhubeka nokuphinda. Ebudeni bemihla, phantse bonke abantu abaneempilo banokulandelwa ukusilela kwintliziyo ekhuselekileyo, ekhuselekileyo, kwaye baninzi nje ababava. Kodwa kwimiba yokukhubazeka inani lezinto ezihlulekayo zikhula, nangona isizathu salo akusoloko sicacile. Ngokuqhelekileyo yile:
isicic heart disease;
izifo ezinobunzima kunye nokuvuvukala kweentliziyo zentliziyo (kuquka ukusetyenziswa kakubi kotywala);
- Ezinye izimo nezifo ezingenayo yeengqondo (izifo ezithathelwanayo, ukulimala kwegazi, isifo se-thyroid, ukuphazamiseka kwesalathisi).
Ukuba iqondo lentliziyo liphazamiseka, igazi alifikeli kwizitho ngokupheleleyo. Ingqondo iyona nto inokukhathazeka "kwindlala": umphumo uyisixhakaxhaka kunye nokuphelelwa amandla. Kukho i-arrhythmias engakhokelela ekutheni i-myocardial infarction, ukuhlaselwa kwe-angina pectoris, i-edema yamapulmoni, ukuphuhliswa kwentliziyo ehlukileyo. Ekugqibeleni, ezinye iintlobo ze-arrhythmia zingozini ubomi. Kodwa ngethamsanqa, abanqabile.
Siza kujonga ingozi.
Ingaba ukhathalela i-arrhythmia? Kubonakala ngathi umbuzo uyisiyatha - ngokuqinisekileyo, ukunyanga! Nangona kunjalo, naziphi na izidakamizwa ezichasayo ziba nemiphumo emibi. Ngokuqhelekileyo banokukhupha i-cardiac arrhythmia, ngamanye amaxesha kunzulu kakhulu. Ngoko kungcono ukuthabatha amayeza xa kwenzeka ukuhlaselwa kwamandla. Iindlela ezifanelekileyo zokukhusela kunye nokonyango iinkqubo ezahlukeneyo zokuphefumla kunye nentamo yokusila. Ukuba i-arrhythmia ingasigxina, imisela amayeza ixesha elide, oogqirha abanolwazi baye bamiswa ngenxa yeempembelelo ezininzi. Impazamo enkulu kukuba uthathe imithi okanye malunga neengcebiso zommelwane (nangona uncedo). Emva koko, i-arrhymia yangaphandle kubantu ababini abahlukeneyo (okanye umntu ofanayo kumaxesha ahlukeneyo obomi!) Kufuna unyango olwahlukileyo.
Ngoxa uncedo lwababamkeli abazodwa, umsebenzi weentliziyo ulawula ingqondo. Abamkeli bazisa ulwazi kwingqondo malunga nazo zonke iinkqubo zamandla zomzimba. Ingqondo ilawula amandla kunye nenqanaba lentliziyo ngokusekelwe kwingcaciso efunyenweyo. Oko kukuthi, unikeza umyalelo "kumqhubi weengqungquthela" ngokusebenzisa amakhemikhali-abalamli kwiimbilini:
- i-acetylcholine kwinkqubo ye-nervympathetic ye-nervous igxotha intliziyo yesantya;
- I-Norepinephrine kwinkqubo yesantya evelwano ivuselelwa ngesigqi. Ngethuba lokungafihli, ukunyuka kwe-norepinephrin kuveliswe, oku kunokubangela ukuba i-arrhythmia.
Indlela eyona ndlela yokufundisa yokuxilongwa yiindidi ezahlukeneyo ze-electrocardiography:
1. i-electrocardiogram eqhelekileyo (ECG);
2. ukuxilongwa ngokugqithiseleyo kwezi-arrhythmias ezifundisa ixesha elide (ngaphakathi kweentsuku) irekhodi - i-ECG iliso ngeendlela zeHolter. Unamathela kumzimba weencinci ezincinci, kwaye usebenza kwishishini eliqhelekileyo yonke imini. Emva koko, ugqirha uhlola i-cardiogram ngosuku - oku kukuvumela ukuba ulandele utshintsho kwishyhym phakathi kwosuku, kuxhomekeke kumsebenzi wakho, imeko yesimo sengqondo nokunye. Ngendlela, kumntu onempilo, i-frese frequency ye-node ye-sinus iyahluka ngokuxhomekeka kwiimfuno zendalo: ukusuka kumaxesha angama-45-60 ngcaciso emininzi ebusuku elala kwi-130-160 kwimithwalo enzima.
Njengoko uyakubona, kukho izimbangela ezininzi kunye neentlobo ze-cardiac arrhythmia. Akukho naluphi na ukukwazi ukuxilonga kunye nokuzinyango. Ukuba uvakalelwa kukuba kunengxaki enjalo nawe okanye ozithandayo, musa ukuqala isifo. Jonga udokotela uze ulandele iingcebiso zakhe.
Ungasusa njani inyopho ekhaya?
I-Alunite - ukutshintshwa kwendalo kunye nabahlaziyi-anti-spirpants kunye ne-deodorants
Indlela yokugcina umqeshwa obalulekileyo?
Ugarnoe ividiyo malunga neekati nabantwana: Okuhle kunye nokuhle kwiinyembezi
Iipatata ezinamafolokhwe kunye nentliziyo yenkukhu
Kuyinkosikazi yenqaku - musa ukulibala malunga nesoda
Uhamba nge-sinamoni kunye ne-jam yokugxila